Ulwazelelo lweShelfor Corpor Nevada yoLwazi kunye neeNdawo
Ungazikhetha naziphi na iinkampani zethu zeNevada Aged Corporations kunye Nevada Shelf Companies. Uya kufumana i-Shelf Corporations, Aged LLC kunye neenkqubo zokuphucula amatyala ezinokongezwa kwinkampani yakho. I-Nevada inika izibonelelo ezininzi, ukufunda ngakumbi malunga Ukufakwa kwiNevada, unokufunda malunga neerhafu zeNevada zerhafu, imithetho efanelekileyo yeshishini, iintlobo zesitokhwe ezinokuthi zikhutshwe kwixesha elizayo kunye nolwazi olubandakanya ngakumbi.
IziBonelelo zeSherifu yeArch Nevada ekhulileyo
Ungaqala kwangoko ukuzixhamla ngokuba nebhizinisi lakho laseNevada ngokukhetha ukuthenga into esele ibandakanyiwe, okanye a I-Arv Nevada Shelf Corporation.
Imibutho emidala yaseNevada inikezela izibonelelo ezifanayo kwinkampani yeNevada kunye nokunye. Zombini ziirhafu ezingeniso zikarhulumente, zinemithetho eqinileyo yokukhuselwa kweeasethi kunye nemfihlo yobunini. (Ibinzana elithi "ishelufu" lithetha ukuba inkampani yenziwa ngaphambi komhla wokuthenga kwaye ihlala kwishelufa ilinde umthengi ofuna iqumrhu elidala.)
Izibonelelo ezongeziweyo zeNevada Shelf Company kunye neNkcukacha
Abanini benkampani endala e-Nevada ayingombali yengxelo yoluntu.
Imfihlo - I-Nevada ayabelani ngolwazi lwenkampani kunye neNkonzo yeRhafu yangaphakathi (IRS). Njengombuso werhafu engeniso, abaqokeleli ulwazi olunjalo ukuba babelane. (Ngokwemvelo, sicebisa ukuthotyelwa okugcwele kwabasemagunyeni beerhafu.)
Ukukhuselwa kwee-Assets - nguNevada kuphela (njengalo mbhalo) okhusela abanini zabelo ekulahlekelweni kwezabelo zabo xa bekutyhilwa ubuqu.
Uyilo olukhawulezileyo kunye nokuHanjiswa- I-Nevada eyilelwe ngokufanelekileyo inokuthi ifayilishwe ngokukhawuleza. Umbutho okhulileyo eNevada unokuhanjiswa kwangoko.
Iintlawulo zoNyaka eziphantsi zoNyaka-Ukuhlaziywa konyaka okubandakanya ukufakwa kuluhlu lwamagosa nabalawuli kuphela yi- $ 125 rhoqo ngonyaka kubathengi abaninzi njengokubhalwa.
Chonga amanye amaGosa kunye nabaLawuli-Abanini zabelo abalawula inkampani. Ke, unokuyilawula inkampani yakho kwaye igama lakho lingaveli kwiirekhodi zikarhulumente ngokutyumba amagosa eqela lesithathu kunye nabalawuli abavumayo ukukuma kwiirekhodi zikarhulumente. Kukho abantu abadumileyo nabanye, ngelixa bethobela ngokupheleleyo, bekhetha ukungabinamali kwezemali kunye nokungaziwa. Kwakhona, oku kuya kusetyenziswa kuphela ngendlela esemthethweni, efanelekileyo.
Kwimibutho ekhoyo inzuzo ichazwa yi-IRS "C" okanye "S" iqumrhu. Ngokubanzi ukuthetha "C" iqumrhu kuhlawulelwa irhafu ngokwahlukeneyo kubanini bezabelo ngelixa umbutho “S” abanini zabelo unoxanduva lokuhlawula irhafu kwinzuzo yecandelo.
Iintlawulo zikarhulumente zoluhlu lonyaka lwamagosa kunye nabalawuli kwi-Nevada okwangoku yi- $ 125.
Jonga iiNkampani eziDala kwi-Intanethi ye-Nevada